अहिलेसम्म बनेन चावहिल-बौद्ध सडक, माधवको निर्देशनपछि केही हुन्छ कि ? – rastriyakhabar.com
अहिलेसम्म बनेन चावहिल-बौद्ध सडक, माधवको निर्देशनपछि केही हुन्छ कि ?
काठमाडौँ । चाबहिल–साँखु सडकखण्डमा हिँड्ने जोकोहीलाई हिलो र धुलोले सताएको धेरै भयो । तर, यो समस्याबाट भने अब छिट्टै छुट्कारा मिल्ने भएको छ । सरकारले आगामी भदौ १२ अगावै सो सडकको मर्मत सम्भार गर्ने भएकोले हिलो धुलोबाट राहत मिल्ने भएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठलगायतको टोलीले आज सो सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरी तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सो क्षेत्रमा यात्रा गर्ने जोकोहीलाई राहत मिल्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निर्माणाधिन बौद्ध–जोरपाटी र कलङ्की नागढुङ्गा सडकखण्डको मर्मतमा लाग्न निर्देशन दिए।
निर्देशनपछि मन्त्री महासेठलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले सडकखण्डको निरीक्षण गरेको हो । टोलीले सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा धुलो र हिलोको समस्याबाट मुक्ति दिइने प्रतिबद्धता जनाएको हो। चाबहिल–साँखु जोड्न कूल १२.५ किलोमिटर सडक स्थानीयवासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेपछि निर्माणमा ढिलाई भएको हो।
सडक छेउका बासिन्दाले मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने भन्दै सङ्गठितरुपमै अवरोध गर्दै आएका छन् । सकेसम्म उनीहरुको उचित माग सम्बोधन गर्ने सरकारी टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले सडक मर्मत र निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी ठूलो समस्यामा परेको भन्दै समस्या समाधानमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। सो सडक बनाउन रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । सडक सीमा छुट्याउन समस्या भएकाले निर्माणमा समस्या परेको छ।
माधव नेपालको सुझाव – छिटो सक्नुस्
स्थलगत निरीक्षणमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले चाबहिल–साँखु सडक निर्माण छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन्। संसदीय अनुगमन समितिमा समेत रहनुभएका उनले सडकको निर्माण अवस्था अनुगमन गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
साँखु ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले त्यहाँ दिनहुँ हजारौँको आवतजावत हुने तर सडकको दूरावस्था हुँदा सर्वसाधारण र यात्रुले धेरै दुःख पाइरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बताए। उनले भने, “विभिन्न बाहना गरेर निर्माणमा अब आलटाल गर्नुभएन, निर्माण छिटो सक्नु प(यो, काम राम्रो हुनुपर्यो।”
अनुगमनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राई र सरिता न्यौपाने, प्रदेशसभा सदस्यद्वय रामेश्वर फुयाँल र मणिराम फुयाँल तथा सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखसहितको टोली सहभागी थियो।